आइफोन-१२ सिरिजका चार फोन सार्वजनिक, २० गिगाबाइटको सिनेमा मात्र ४५ सेकेन्डमा डाउनलोड हुने :: Setopati
आइफोन-१२ सिरिजका चार फोन सार्वजनिक, २० गिगाबाइटको सिनेमा मात्र ४५ सेकेन्डमा डाउनलोड हुने रातमा बिना फ्ल्यास सेल्फी लिने सुविधा
एजेन्सी अमेरिका, असोज २८
एप्पल कम्पनीले आइफोन-१२ सिरिज सार्वजनिक गरेको छ। यस अन्तरगत उसले चार वटा मोडल सार्वजनिक गरेको छ।
मंगलबार एक डिजिटल कार्यक्रम गर्दै उसले यी मोडलहरू सार्वजनिक गरेको हो।
एप्पलले सार्वजनिक भएका आइफोन-१२ सिरिजका फोनहरू फाइभ-जी नेटवर्कयुक्त भएको जनाएको छ।
'हामीले आइफोनको पूरै सिरिज फाईभजीमा ल्याएका छौं। यी आइफोन नयाँ युगको सुरूवात हो', एप्पलका प्रमुख टिम कुकले भने।
एप्पलले आइफोन-१२(६४, १२८ र २५६ जिबी स्टोरेज), आइफोन-१२ मिनी (६४, १२८ र २५६ जिबी स्टोरेज)का अलावा आइफोन-१२ प्रो (१२८, २५६ र ५१२ जिबी स्टोरेज), आइफोन १२ प्रो म्याक्स (१२८, २५६ र ५१२ जिबी स्टोरे) लन्च गरेको छ।
कति होला मूल्य?
सार्वजनिक गरिएका आइफोनको मूल्य ६ सय ९९ अमेरिकी डलरदेखि १ हजार १ सय ९९ अमेरिकी डलरसम्म पर्नेछ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको मूल्यसूचि अनुसार आइफोन-१२ मिनीको ६ सय ४९ छ भने आइफोन १२ को ७ सय ९९ अमेरिकी डलरबाट सुरू हुनेछ। यस्तै आइफोन-१२ प्रो र आइफोन-१२ प्रो म्याक्सको मूल्य क्रमशः ९ सय ९९ अमेरिकी डलर तथा १ हजार ९९ डलरबाट सुरू हुनेछ।
विश्व बजारमा आइफोन-१२ मिनिको प्रि-अडर ६ नोभेम्बरबाट सिरू हुनेछ भने १३ नोभेम्बरदेखि ग्राहकको हातमा पर्नेछ। यस्तै आइफोन-१२ आइफोन-१२ प्रोको प्रिअडर १६ अक्टुबरबाट सुरू हुनेछ भने २३ अक्टोबरबाट ग्राहकले पाउनेछन्। आइफोन-१२ प्रो म्याक्सका लागि ग्राहकहरूले १३ अक्टुबरबाट प्रिअडर गर्नसक्नेछन् भने २० नोभेम्बरबाट बिक्री सुरू हुनेछ।
विज्ञहरूले सन् २०१४ मा आइफोन ६ सार्वजनिक गरेयता आइफोन-१२ मा कयौं यस्ता नयाँ फिचर छन् जसले कम्पनीको पहुँच अझ विस्तार हुनसक्छ।
'फाईभजी प्रविधिले डाउनलोड र अपलोडमा नयाँ स्तरमा आफ्नो प्रदर्शन दिनेछ, भिडिओ स्ट्रिमिङ् उच्च गुणस्तरको हुनेछ, गेम धेरै मज्जायुक्त हुनेछ र साथमा अरू धेरै सुविधा हुनेछ' एप्पलका प्रमुख टिम कुकले भने।
यो पनि पढ्नुस्ः आइफोन-१२ मिनी संसारकै सानो र हलुका ५जी फोन, यस्ता छन् विशेषता
स्क्रिनको आकारमा परिवर्तन गरिएको छ
आइफोन-१२ प्रोको स्क्रिन पहिलेका आइफोनको तुलनामा ठूलो हुनेछ। तर पहिलोपटक यी फोनमा चार्जर र एयरफोन उपलब्ध गराइने छैन। पर्यावरणमाथि यसको प्रभाव कम पार्नलाई यस्तो गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
एप्पलका अनुसार आइफोन-१२ को स्क्रिन ६.१ इन्च हुनेछ भने पहिलेको तुलनामा यी सिरिजका फोन ११ प्रतिशत पातलो र १६ प्रतिशत हलुका हुनेछन्। कम्पनीले फोनमा रिजोल्यूसन धेरै हुने र तीनमा सिरामिक सिल्डको प्रयोग गरिएको जनाएको छ।
आइफोन-१२ प्रोको स्क्रिन ६.१ इन्चको हुनेछ भने आइफोन-१२ प्रो म्याक्सको स्क्रिन आकार ६.७ इन्चको हुनेछ।
यी फोनमा पहिलोपटक ए-१४ बायोनिक चिप लगाइएको छ जसलाई पाँच नानोमिटरको प्रोसेसरमा बनाइएको छ। यसले तस्बीर अझ राम्रो हुने कम्पनीको दाबी छ।
फ्ल्यास बिना नै रातमा सेल्फी लिनसकिने
कम्पनीले नयाँ आइफोनबाट फ्ल्यासको प्रयोगबिना नाइट-मोडमा सेल्फी लिन सकिने जनाएको छ। यसका अलावा कलर-कन्ट्रास्ट र आवाजको सवालमा पनि आइफोनको विशेषता पहिले भन्दा राम्रो छ।
आइफोन-१२ मा १२ मेगापिक्सेलका दुई वटा वाइड एङ्गल क्यामरा दिइएको छ। कम्पनीले यसबाट कम प्रकाशमा पनि राम्रो तस्बीर खिच्न सकिने दाबी गरेको छ। यस्तै आइफोन-१२ मा नाइट मोडमा टाइमल्याप्स विशेषता सहितको भिडिओ रेकर्डिङ सुविधा दिइएको छ। यसले पनि कम प्रकाशमा राम्रो भिडिओ रेकर्डिङ गर्नेछ।
यो पनि पढ्नुस्ः महँगा आइफोन-१२ प्रो र प्रो म्याक्समा के छन् फिचर?
स्यामसङले पहिलोपटक फरवरी २०१९ मा फाइभ-जी प्रविधियुक्त ग्यालेक्सी एस-टेन सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि हुवावे, वान प्लस र गुगलले पनि फाइभ-जी प्रविधिको फोन सार्वजनिक गरेका थिए।
एप्पलले आफ्नो नयाँ फोनलाई फाइभ-जीको ३.५ गिगाबाइट प्रतिसेकेण्डको गतिमा परीक्षण गरेको जनाएको छ। यसको अर्थ करिब २० गिगाबाइटको सिनेमा मात्र ४५ सेकेन्डमा डाउनलोड हुनेछ।
'ब्याट्री बचाउनका लागि आइफोन-१२ को फो-जी र फाइभ-जीका बीचमा परिवर्तन गर्न सकिने यो क्षमताले ग्राहकका लागि सधैं फाइभ-जी उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने जरूरी छैन', फ्यूचरसोर्स कन्सलटेन्सीका स्टीफन मियर्सले भने। तर कम्पनीले ग्राहकको अनुभव नेटवर्क र क्षेत्रको हिसाबले फरकफरक हुने र फाइभ-जी सेवा सधैं चालु नहुने बताएको छ।
बेलायत फाइभ-जी सुरू गर्ने दोश्रो युरोपीय देश हो। यसबाट बेलायतलाई पाइदा भयो तर यसको क्षेत्र भने धेरै नै छिटपुट रह्यो।
यस्तै अमेरिका एप्पलको सबैभन्दा ठूलो बजार हो। त्यहाँ फाइभ-जीको गति एकदमै कम छ। एक अध्ययनका अनुसार क्यानडामा फो-जी नेटवर्क अमेरिकाको फाइभ-जी भन्दा गतिवान छ र केही देशमा फाइभ-जी प्रविधि आमजनताका लागि अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन्।
चीन एप्पलको दोश्रो ठूलो बजार हो। चीनको सरकारले देशमा फाइभ-जीलाई एकदमै बढवा दिएको छ र हालै उसले बेइजिङ र शेनजेनमा फाइभ-जी नेटवर्कको काम पूरा भएको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २७, २०७७, २३:२२:००
‘अर्को बैंकको एटिएमबाट पैसा निकाल्दा तत्काल शुल्क लाग्दैन’
सुरू नै भएन ४ वर्षमा सकिने भनेको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र
पढाउन छोडेर केराको हिसाब-किताब गरिरहेका 'म्याथ सर'
पन्ध्र वर्षपछि पक्राउ परे गैंडा मार्ने गिरोहका ‘शार्प सुटर’
युटुबमा अब नराम्रा कमेन्ट लेख्न नपाइने
१० हजारभन्दा कम मूल्यका ४ स्मार्टफोन ल्याउँदै लाभा, के छन् फिचर्स?
मान्छेको मात्र होइन, भालु र गाईवस्तुको पनि अनुहार चिन्दैछ प्रविधिले
वैदेशिक रोजगारी बीमा र कल्याणकारी कोषको रकम इसेवाबाट तिर्न सकिने
टिकटक अब तीन मिनेटसम्म हुन सक्ने !
चिनियाँ अन्तरिक्ष यानद्वारा चन्द्रमाको सतहबाट नमुना संकलन